प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला दिने बुहारी पनि पीडामा - अभियान खबर
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १३ वर्षअघि भारतमा प्रत्यारोपित मृगौला फेर्न विदेश जाने तयारीमा छन् । तर, उनको आफ्नो मृगौला दिने उपकारी बुहारीका बाबुको व्यथा बेग्लै छ ।
आफ्नो मृगौला दिने भाइबुहारीका पिताजी अहिले आफै सोही समस्याबाट ग्रस्त बनेका छन् । नाम हो, ध्रुव घिमिरे, चितवनका पुराना एमाले नेता । प्रधानमन्त्रीका भाइ ताराकी पत्नी अञ्जना घिमिरेले १३ वर्षअघि आफ्नो एउटा मृगौला जेठाजुलाई दिएकी थिइन् । उनका बुबालाई पनि यही बिमारीले सताएको छ ।
तर, उनी आर्थिक सहयोगका लागि सरकार कहाँ नजाने पक्षमा छन् । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका ५ वटा विद्युतीय बस ११ महिनादेखि ग्यारेजमै थन्किएका छन् । प्राविधिक परीक्षणमा गुणस्तरहीन भेटिएका ती बस उद्घाटन गरेको भोलिपल्टदेखि नै बेकम्मा छन् । प्रधानमन्त्री ओली गत कात्तिक ७ मा हरिहर भवनबाट विद्युतीय बस चढेर सिंहदरबारसम्म गएका थिए । सरकारले गुणस्तरहीन ती बस फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनी […]
Posted on March 2, 2019 Author abhiyaan
काठमाडौँ – दक्षिण कोरियामा कम्तीमा तीन वर्ष वैधानिक रुपमा काम गरेर फकिएर पुनः कोरिया जान चाहने युवाका लागि शुक्रबारदेखि आवेदन खुल्ने भएको छ । आउँदो वैशाख ४ गतेदेखि सञ्चालन गरिने कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) माध्यमबाट हुने परीक्षाका लागि आवेदन खुलेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकाठमाडौँ – दक्षिण कोरियामा कम्तीमा तीन […]
दुई तिहाइको सरकार असफल पार्न डा. केसीको अनसन’
Posted on July 17, 2018 July 17, 2018 Author abhiyaan
३२ असार, बुटवल । प्रदेशसभा ५ को बैठकमा डा. गोविन्द केसीको अनसनको विषयलाई लिएर सांसदहरु विभाजित भएका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद उत्तरकुमार ओलीले दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई असफल बनाउन डा. केसीलाई उचालिएको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले केसीले उठाएका माग जायज रहेको भन्दै माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड […]
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनः को–को बने मन्त्री ? (सूचीसहित